नेपाल आज | शक्तिको आडमा लकडाउनमा पनि यसरी खुल्यो भाटभटेनी
शक्तिको आडमा लकडाउनमा पनि यसरी खुल्यो भाटभटेनी
लिए उपहार, नलिए धम्की
सोमबार, १९ असोज २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
नेपालमा कोरोना भाईरसको संक्रमण १/२ जनामा देखिन थालेदेखि नै जनजिवन अस्तब्यस्त छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले कहिले लकडाउन तथा कहिले निषेधाज्ञा जारी गर्दै गयो। वजार/पसल, यातायात, कलकारखाना, उद्योग, ब्यापार/ब्यवसाय, विद्यालय सवै वन्द भए।
लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञाले अत्यावस्यक काम वाहेक मानिसहरु घरभित्रै थुनिए। दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न पनि सर्वसाधारणले चोर जस्तो लुक्नु पर्ने अवस्था श्रृजना गरियो। सरकारी निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै धेरै सर्वसाधारण कुटिए र धेरैलाई अपमान/दुर्ब्यवहार गरियो। कार्य क्षेत्रवाट फर्कदै गरेका चिकित्सक र पत्रकारसमेत अछुतो रहेनन्। कसैलाई लाठि वर्साईयो त कसैलाई अमानविय दुब्र्यवहार गरियो। ११ चैत ०७६ देखि सुरु भएको यो असहज अवस्था अझै सामान्य भएको छैन ।
सर्वसाधारण मारेर ठुला ब्यापारीलाई संरक्षण
तर, लकडाउन र निषेधाज्ञाकै समयमा पनि नेपालमा यस्तो वर्ग र ब्यक्तिहरु पनि देखिए जस्लाई नत कारोनाले असर गर्यो नत सरकारी निर्देशनले। उनीहरुको कारोवार (ब्यापार/ब्यवसाय) सदाझै निर्वाध चलिरह्यो । उनीहरुको लापर्वाहीमा उल्टो सरकारले नै सहयोग गर्यो । तिनै मध्येको एक हो– भाटभटेनी सुपर मार्केट।
सुपरस्टोरको नामबाट देशका मुख्य शहरमा रिटेल चेन सञ्चालन गरिरहेको भाटभटेनीले आउटलेटका नाममा लकडाउन र निषेधाज्ञामा ब्यापार गरिनै रह्यो। तर, ठेलामा तरकारी र भुजा वेचेर जिविका चलाउने नागरिकको रोजीरोटी भने सरकारले खोस्यो। जिविका चलाउन पसल खोल्न खोज्ने सामान्य नागरिक प्रहरी र जनिप्रतिनिधिवाटै कुटिए। यसको विरोध पनि भयो, तर सरकारले कसैका कुरा सुनेन।
ठुला पोस्न साना ब्यापारीलाई जनप्रतिनिधि र प्रहरीको डण्डा
पसल खोलेको विषयमा सप्तरीको सप्तरकोशी नगरपालिका १, फत्तेपुरका आलु ब्यापारी वडाअध्यक्ष नारायण आचार्यको हातवाट कुटिए । तरकारी ब्यापार गर्ने देवु साहलाई प्रहरीले लाठि वर्सायो । फत्तेपुरवासीले त्यो अमानविय ब्यवहार अहिले पनि भुल्न सकेका छैनन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, लकडाउनका नाममा देशका धेरै ठाउमा नागरिकले कुटाई खानु परेको छ। स्थानीयवासी भन्छन्–‘सरकारले वेच्न पाउने भनेर छुट दिएको सामान वेच्न पनि प्रतिवन्ध लगाउने जनप्रतिनिधी र प्रहरीले भाटभटेनी जस्ता सुपरमार्केट र डिपार्टमेन्ट स्टोर वन्द गराउनु पर्दैन ?’
तर, नागरिकले सोचे जस्तो नियम कानुन सवैतिर लागु भएन । भाटभटेनीका कलंकी, महाराजगन्ज, नक्साल, भक्तपुर, कोटेश्वर, विराटनगर, धरान, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्जका शाखाहरु कहिलै वन्द भएनन् । किनमेलमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको पनि कतै देखिएन। ठेलामा सामान वेच्दा सर्ने कोरोना भाटभटेनीवाट पनि सर्छ भन्ने सरकार संचालकहरुले सोचेनन्।
‘भाभटेनीलाई दिइएको सुविधा अन्य त्यस्तै प्रकृतिका पसल र जिविका चलाउन कै लागि ठेलामा सामान वेच्ने नागरिकालाई दिने की नदिने ? सरकार र नियमनकारी निकायले यो प्रश्नको जवाफ दिन पनि उचित ठानेनन्। वरु सरकारका मन्त्री तथा प्रहरीका उच्च अधिकारी नै भाटभटेनीसहित ठुला ब्यापारीको संरक्षणमा लागि रहे।
सरकारको निर्देशन पालना गराउने निकाय चुपचाप वस्यो । प्रहरीका हाकीमका श्रीमती नै तल्लो तहका प्रहरीलाई पछुवा वनाएर लावालस्करसहित भाटभटेनीमा किनमेल गर्न गएको देखियो । जसले गर्दा भाटभटेनीलाई थप हौसला भयो । ‘सर्वत्र वजार÷पसल वन्द गराएर सुपरमार्केट चलाउन सरकारले छुट दियो’ फुटपाथमा कपडा पसल गर्ने एक ब्यापारी भन्छन्–‘मानवता देखाउनु पर्ने समयमा भाटभटेनीका मालिक मिनवहादुर गुरुङ्गले लुट मच्चाउँदा समेत सरकारले रोकेन।’ ब्यापारका लागि गुरुङ्गले पावरको दुरुपयोग गरेको उनको वुझाई छ ।
मिनवहादुरले सुरुदेखिनै नेकपा अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नाम दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । कुनै समय गुरुङ्गसँग पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नाम जोडियो । भाटभटेनी प्रचण्डकै हो भनेर हल्ला चल्यो । उनले त्यसलाई पनि उपयोग गरे। हल्लाको विषय हालसम्म पनि पुष्टि त भएको छैन तर प्रचण्डकै पैसाको हेराफेरीवाट भाटभटेनीले यो मुकाम प्राप्त गर्यो भन्ने विषय चाहि अहिले पनि चर्चाकै विषय छ।
तर, पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री रहेका डा. युवराज खतिवडा र महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेललाई पनि गुरुङ्गले हातमा लिएका छन् । गुरुङ्गले नियमनकारी निकायलाई त्रासमा पारेर आफनो दुनो सोझ्याएको नेकपाका दोश्रो तहका नेताहरु वताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री, पुर्व प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता लगायतको नाम भजाउने र अन्यलाई धम्क्याउने प्रवृत्ति गुरुङ्गमा सुरु देखिनै देखिएको हो’ एक नेता भन्छन्–‘त्यसकै कारण प्रहरी तथा करका हाकिम उनीसँग डराउँछन्। त्यसको फाईदा उनले ब्यापारमा लिएका छन् ।’
नेकपाका दोश्रो तहका अधिकांश नेता गुरुङ्गसँग क्रुद्ध छन् । तर, शिर्ष नेताहरुको आशिर्वादका कारण उनीहरु खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । गुरुङ्गले प्रहरी र करका हाकीम मात्र होईन, ठुला नेताको नाममा दोश्रो तहका नेतालाई अपमानीत गर्ने गरेको पनि उनीहरुको भनाई छ । ‘गुरुङ्गमा शिर्ष नेतालाई चन्दा दिएको छु भन्ने घमण्ड छ’ उनीहरु भन्छन्–‘त्यसैले दोस्रो तहका नेताहरु गुरुङ्गवाट अपमानीत हुने गरेका छन् ।’
हुनत गुरुङ्गलाई प्रचण्डसँग जोडने गरिन्छ। तर, उनको सिधा सम्पर्क प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग रहेको एक नेताले वताए । ‘प्रचण्डको नाम मात्र वदनाम हो, भित्री कुरा अर्कै छ’ उनी भन्छन्–‘अहिले गुरुङ्ग र प्रधानमन्त्री ओलीको सिधा सम्पर्क छ ।’
ओली र गुरुङ्गको सम्पर्क सुत्रका रुपमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले काम गरेको उनको दावी छ ।
भाटभटेनीको शाखा रहेको जिल्लाका सिडिओ, प्रहरी प्रमुख तथा सम्बन्धित कर अधिकृतलाई समेत गुरुङ्गले प्रभावमा राख्ने गरेका छन् ।
विशेष गरी प्रभावसाली ब्यक्तीका श्रीमतीहरुलाई खुसी पार्ने अचम्मको रणनीति भाटभटेनीले प्रयोगमा ल्याएको छ। ‘पहिलो चरणमा खाद्यान्नसहित भान्साका सामानहरु घरमै पुर्याइन्छ’ जानकारहरु भन्छन्–‘यो महिलाहरुलाई खुसी पार्ने तरिका हो। महिलाहरु खुसी भए हाकीमहरुले चाहेर पनि केहि गर्न नसक्ने वुझाईले यहाँ काम गर्छ ।’
त्यसले पनि काम नवन्ने अवस्था आयो भने मदिरा, टिभी, फ्रिजलगायतका उपहार दिएर खुसी पार्ने चलन रहेको उनीहरु वताउँछन् ।
फकाउँदा र उपहार टक्र्र्याउदा पनि नटेरे मन्त्री, प्रधानमन्त्री र शिर्ष नेताका नाम जोडेर तर्साउने रणनीतिले भाटभटेनीलाई हालसम्म कसैले औला ठड्याउन नसकेको उनीहरु जिकिर गर्छन ।